သူတို့စုံတွဲရဲ့ အချစ်ပန်းစပွင့်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးမှာ အမှတ်တရရုပ်ထုလေးပုံဖော်ထားတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? – Trend.com.mm
သူတို့စုံတွဲရဲ့ အချစ်ပန်းစပွင့်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးမှာ အမှတ်တရရုပ်ထုလေးပုံဖော်ထားတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
Posted on May 24, 2018 May 24, 2018 by Noel
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အချစ်တော်မင်းသမီးချောလေး အွန်စော (ဆောင်းဟေဂို)နဲ့ မင်းသားချော ဆောင်ဂျွန်ကီတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲက ပြီးဆုံးလို့ နှစ်ဝက်တောင်ရောက်နေပြီဆိုပေမဲ့ သူတို့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့အဆက်မပြတ်ကိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရှာဖွေစုဆောင်းပြီးအင်တာနက်ပေါ်တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မင်္ဂလာပွဲသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ သိသေးမယ်မထင်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။
ပရိသတ်တွေလည်းသိကြမှာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ “Descendants of The Sun” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်သလို ရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ တည်နေရာ Gangwon ပြည်နယ်ဟာလည်းနာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးခရီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။Gangwon ပြည်နယ်၊Taebaek မြို့လေးမှာရှိတဲ့ မိုင်းတွင်းဟောင်းတစ်ခုဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့သူမြို့သားတွေဟာ ဒီလိုမျိုးအမှတ်တရတွေ ၊ပျော်ရွှင်စရာတွေအပြည့်ရှိတဲ့ရိုက်ကူးရေးနေရာလေးမှာ ပန်းခြံလေးတစ်ခုဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပန်းခြံကို Urk ဘုရားကျောင်းအနီးဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုက Song-Song couple အနမ်းပေးနေတဲ့ပုံကို ရုပ်ထုအဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ သူတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ် လို့မကြေညာခင်တစ်လလောက်မှာ ပန်းခြံလေးက ပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၃၁ရက်၊မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ Taebaek ကမြို့သူမြို့သားတွေက သူတို့စုံတွဲရဲ့အမှတ်တရနေရာဖြစ်တဲ့ Gangwon ဒေသ၊ပန်းခြံလေးမှာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေက Song Song စုံတွဲရဲ့ အေဂျင်စီ Blossom Entertainment ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပြီး “သူနဲ့မြို့သူမြို့သား အယောက် ၅၀၀၀၀ ဟာ သူတို့စုံတွဲအချစ်ဇာတ်လမ်းစတင်ခဲ့တဲ့နေရာ၊ရိုက်ကူးရေးနေရာလေးဖြစ်တဲ့ပန်းခြံမှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်”ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒါ့အပြင်မင်္ဂလာပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအ၀၀ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတရားဝင်နဲ့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုတောင်သူတို့စုံတွဲကိုချစ်ကြတာလဲနော် <3
အောက်တိုဘာ ၃၁ရက်နေ့ကတော့ Song Song စုံတွဲလေးဟာ ဆိုးလ်မြို့၊ရှီလာဟိုတယ်မှာ အထူးဧည့်သည်တွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုစည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက် အလွမ်းပြေမင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အခဈြတျောမငျးသမီးခြောလေး အှနျစော (ဆောငျးဟကြေို)နဲ့ မငျးသားခြော ဆောငျဂြှနျကီတို့ရဲ့ မင်ျဂလာပှဲက ပွီးဆုံးလို့ နှဈဝကျတောငျရောကျနပွေီဆိုပမေဲ့ သူတို့ကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ အဆကျမပွတျကိုသူတို့နဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးတှရှော ဖှစေုဆောငျးပွီးအငျတာနကျပျေါတငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့ မင်ျဂလာပှဲသတငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှေ သိသေးမယျမထငျတဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့သတငျးတဈပုဒျရှိပါတယျ။
ပရိသတျတှလေညျးသိကွမှာပါ။သူတို့နှဈယောကျရဲ့ “Descendants of The Sun” ဇာတျလမျးတှဲဟာ အရမျးအောငျမွငျခဲ့တာဖွဈသလို ရိုကျကူးရေးလုပျခဲ့တဲ့ တညျနရော Gangwon ပွညျနယျဟာလညျးနာမညျကြျောကွားခဲ့ပွီးခရီးသှားတှစေိတျဝငျစားတဲ့နရောတဈခုဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။Gangwon ပွညျနယျ၊Taebaek မွို့လေးမှာရှိတဲ့ မိုငျးတှငျးဟောငျးတဈခုဟာ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးစတငျခဲ့တာဖွဈတဲ့အတှကျ မွို့သူမွို့သားတှဟော ဒီလိုမြိုးအမှတျတရတှေ ၊ပြျောရှငျစရာတှအေပွညျ့ရှိတဲ့ရိုကျကူးရေးနရောလေးမှာ ပနျးခွံလေးတဈခုဆောကျလုပျခဲ့ပါတယျ။
ပနျးခွံကို Urk ဘုရားကြောငျးအနီးဆောကျလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး ဇာတျဝငျခနျးတဈခုက Song-Song couple အနမျးပေးနတေဲ့ပုံကို ရုပျထုအဖွဈပုံဖျောခဲ့ကွပါတယျတဲ့။ သူတို့မင်ျဂလာဆောငျတော့မယျ လို့မကွညောခငျတဈလလောကျမှာ ပနျးခွံလေးက ပွီးဆုံးသှားတာဖွဈပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၃၁ရကျ၊မင်ျဂလာပှဲကငျြးပတော့မယျလို့ကွညောခဲ့တဲ့အခြိနျမှာတော့ Taebaek ကမွို့သူမွို့သားတှကေ သူတို့စုံတှဲရဲ့အမှတျတရနရောဖွဈတဲ့ Gangwon ဒသေ၊ပနျးခွံလေးမှာ မင်ျဂလာပှဲကငျြးပဖို့ မြှျောလငျ့ခဲ့ပွီး တာဝနျရှိသူတှကေ Song Song စုံတှဲရဲ့ အဂေငျြစီ Blossom Entertainment ကို ကိုယျတိုငျသှားရောကျခဲ့ပွီး “သူနဲ့မွို့သူမွို့သား အယောကျ ၅၀၀၀၀ ဟာ သူတို့စုံတှဲအခဈြဇာတျလမျးစတငျခဲ့တဲ့နရော၊ရိုကျကူးရေးနရောလေးဖွဈတဲ့ပနျးခွံမှာမင်ျဂလာပှဲကငျြးပဖို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ”ဆိုပွီး သူတို့ရဲ့ ဆန်ဒကို တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျတဲ့။ဒါ့အပွငျမင်ျဂလာပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ကိစ်စအဝဝကိုတာဝနျယူဆောငျရှကျပေးမှာဖွဈတယျလို့လညျးတရားဝငျနဲ့တောငျးဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဘယျလိုတောငျသူတို့စုံတှဲကိုခဈြကွတာလဲနျော <3
အောကျတိုဘာ ၃၁ရကျနကေ့တော့ Song Song စုံတှဲလေးဟာ ဆိုးလျမွို့၊ရှီလာဟိုတယျမှာ အထူးဧညျ့သညျတှကေိုဖိတျကွားခဲ့ပွီးမင်ျဂလာပှဲကိုစညျကားသိုကျမွိုကျစှာကငြျးပခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှအေတှကျ အလှမျးပွမေင်ျဂလာပှဲပုံရိပျလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
အသက်ရှုမှားလောက်တဲ့ ရှုခင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Slovenia ရဲ့အလှ
ချစ်သူသက်တမ်း ၂နှစ်ကျော်အကြာမှာ လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီဖြစ်တဲ့ Seo In Guk နဲ့ Park Bo Ram